Baragkacayaasha Galkacayo oo saamayn deegaan kala kulmay roobabka xilligan dayrta (Dhegeyso) – Radio Daljir
Baragkacayaasha Galkacayo oo saamayn deegaan kala kulmay roobabka xilligan dayrta (Dhegeyso)
Oktoobar 23, 2013 5:48 b 0
Galkacayo, October 23, 2013 – Roobabkii xilliga dayrta oo ka curtay meelo ka mid ah gobolka Mudug iyo magaalada Galkacayo ayaa saamayna adag ku reebay dadka danyarta ah, waxaa haatan xaalado is biirsaday laga sheegayaa kaamamka Galkacayo.
Habeenadii ina dhaafay roobab xoog leh oo ka da?ay Galkacayo ayaa wararku tilmaamayaan in ay saamayn adag ku reebeen dadka Baragkacayaasha ah ee Galkacayo jooga, Xuseen Jaamac guray oo ka mid ah maamulka Baragkacayasha ayaa daljir u sheegay xaalado jira.
?Marxalada jirta waa daran tahay guryihii bacaha iyo cooshada ka samaynaa waa bur bureen qeybtood, daryeel la?aan dhinaca caafimaadka ah ?iyana waa jirta.? Ayuu yiri Xuseen Jaamc
Meelaha ugu daran ee xaaladu ka jirto waxaa ka mid ah Kaamka mustaqbal 1 ee gudaha Galkacayo ku yaala, isla markaasna ay degan yihiin in ka badan 200 o qows oo dad ka soo cararay deegaankoodii ah, Xuseen jaamac ayaa sheegay in gargaar loo baahan yahay.
?Hay?adaha gargaarka, dowladda hoose, dowladda Puntland iyo bulshada intaba waxaan ka dalbanaynaa in ay dadka u gurmadaan.? Ayuu yiri Xuseen Jaamac
DHEGEYSO: Xuseen Jaamac oo u waramay Jaamac Cabdiraxmaan oo daljir ka tirsan
Mudane Madoobe ?wefdiga waxaan kala arinsannay horumarinta waxbarashada, biyaha iyo maamulka?